Wasiir Diini oo dalacsiiyey askar tababar loo soo xiray – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Askar ka tursan kuwa milateriga Soomaaliya ayaa maanta tababar socday muda sanad iyo sideed bilood ah loogu soo xiray xerada Jaziira ee magaalada Muqdisho.
Xiritaanka Tababarkaasi ayaa waxa ka qeyb galay Wasiirka Wasaarada Gaashandhiga ee xukuumada Federaalka Soomaaliya, Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini, Taliyaha Ciidanka xooga dalka Soomaaliyed S/guuto Daahir Aadan Cilimi “Indhaqarshe” iyo saraakiil kale.
Madaxa Hogaanka Ciidanka xooga dalka Soomaaliyed Janaraal Cabdullahi Maxamed Ceynte oo goobta ka hadlay ayaa Wasiirka Wasaarada Gashaandhiga iyo Taliyaha Ciidanka xooga dalka ugu warbixiyay mudadii uu tababarka socday iyo hogaanka loo tababaray.
Taliyaha ciidanka xooga dalka Soomaaliyed sareeyo guuto Daahir Aadan Cilmi “Indhaqarshe” ayaa askarta tababarka loo soo xiray kula taliyey iney mas’uuliyad gaar ah iska saaraan badbaadinta dalka iyo shacabka Soomaaliyed.
Wasiirka Wasaarada Gaashandhiga ee xukuumada Federaalka Soomaaliya, Cabduqaadir Sheekh Cali Diini ayaa sheegay in ciidanka xooga dalka Soomaaliyed ay kaalin muuqato ka qaateen horumarka amni ee maanta ka jira dalka.
Gebagebadii xafladda ayaa wasiirka Wasaarada Gaashandhiga ee xukuumada Federaalka Soomaaliya iyo taliyaha ciidanka xooga dalka Soomaaliyed waxaa ay daraja xidigle u xireen qaar kamid ah ciidanka tababarka qaatay ee ladalac siiyay.
Wasiir Diini ayaa ku booriyay askarta maanta la dalac siiyay in naftooda ay u huraan dalkooda iyo dadkooda.
Leego: Alshabaab oo si gaadmo u weeraray AMISOM